Wakaaladda Biyaha Hargeysa oo Sannadkan Gudihiisa la soo Degtay Mishiinkii Labaad – Hargeisa Water Agency
Wakaaladda Biyaha Hargeysa oo Sannadkan Gudihiisa la soo Degtay Mishiinkii Labaad
Hargeysa (HWA)- Wakaaladda Biyaha Hargeysa ee caasimadda Somaliland, ayaa mishiikii labaad ee loogu talogalay biyo-soo-saarka saldhigga labaad ee Kaamka Biyo-khadar la soo degtay sannadkan cusub gudihiisa.
Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Hargeysa Mr. Ibraahim Siyaad Yoonis oo warbaahinta xafiiskiisa kula hadlay, ayaa sheegay in mishiinkan cusub ee wakaaladdu la soo degtay noociisu yahay 50 KVA Evico oo ay ka soo iibsatay dalka Italy, kaasoo loogu talogalay inuu xoojin u noqdo biyo-soo-saarka saldhigga labaad ee Kaamka Biyo-khadar.
“Waxa maanta [shalay] na soo gaadhay mishiin labaad ee Wakaalada Biyaha Hargeysai soo iibsato sannadkan gudihiisa. Mishiinkan noociisu yahay 50 KVA Evico oo Talyaani ah, ayaanu ugu talogalay inuu xoojin u noqdo biyo-soo-saarka saldhigga labaad ee Kaamka Biyo-khadar,” ayuu Ibraahim Siyaad Yoonis.
Waxa kale, Maareeyaha sheegay in miishiinkan cusub oo ah kii labaad ee Wakaaladda Biyaha Hargeysa la soo degto laba bilood gudahhood ah oo qeyb ka yahay dedaallada Wakaaladdu ugu jirto biyo-waraabinta caasimadda.